Fanampiana ny hafa : Ny 15 isan-jaton’ny malagasy mpanome ra an-tsitrapo -
AccueilSosialyFanampiana ny hafa : Ny 15 isan-jaton’ny malagasy mpanome ra an-tsitrapo
Fanampiana ny hafa : Ny 15 isan-jaton’ny malagasy mpanome ra an-tsitrapo
14/06/2018 admintriatra Sosialy 0
« Aoka ianao ho an’ny hafa, omeo ny ranao, hizara fiainana”, io no loha-hevitra ny andro iraisam-pirenena ho an’ny fanomezana ra, hankalazana anio 14 jona. Ankoatra ireo firenena hafa mikambana ao amin’ny OMS dia isan’ireo mankalaza ity andro ity ihany koa i Madagasikara, izay hanomezana lanja ny fiainan’ny zanak’olombelona, ny fanajana, ny fiaraha-miory sy ny fangorahana. Ny fanomezana ra dia fihetsika ny firaisankina, ho an’ity taona ity, entina hanamarihana ny andro androany ny fanangonana ra eny amin’ny ivo-toeram-paritra ny famindrana ra. « Ny ra sy ny vokatra mety aterik’izany dia singa iray lehibe amin’ny fitsaboana vonjimaika izay tafiditra ao anatin’ny fandraisana an-tanana ny marary, ny fandidiana na fiterahana eny amin’ny hopitalim-panjakana na tsy miankina”, hoy ny minisitry ny Fahasalamana, Pr Rantomalala Harinirina Yöel.
Ireo mpanome ra maimaim-poana dia mandray anjara amin’ny fahaveloman’ny hafa, izay tafakatra hatramin’ny 1 tapitrisa manerantany. Ny OMS izay mamporisika ny firenena rehetra mikambana ao aminy amin’ny fanomezana ra an-tsitrapo sy maimaim-poana hatramin’ny 100 isan-jato nefa mbola lavitra ny eto Madagasikara satria mbola latsaka ny 15 isan-jato ny mpanome ra an-tsitrapo eto amintsika. Ka ity fankalazana dia fotoana hamporisihana ny olona rehetra mba hiditra ao anatin’ny mpanome ra an-tsitrapo.